Chitatu, July 21, 2010 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Lorraine Bhora
Vatengesi vese vanoda uye vanovenga sweepstake nemakwikwi. Nepo maturusi anoshanda ekuvaka chiziviso cherudzi uye achigadzira tarisiro rondedzero, anonetesa, anotora nguva, uye anonetsa kuitisa. Saka riini Daniel Herndon weRed Wall Rarama kwakauya nezano rinotyisa rekudzoserwa kukwidziridzwa kuchikoro kumutengi wedu Dr. Jeremy Ciano weRevolutionEyes Ini ndaifara nezano iri, asi ndine hanya nekuurayiwa.
Makwikwi ari nyore:
Vabereki vanoendesa mifananidzo yevana vavo vakapfeka magirazi uye magirazi ezuva
Vanobva vatora shamwari neshamwari kuti vavhote.
Mwana ane mavhoti mazhinji anokunda kukwira helikopta, matikiti kumutambo weI Ice uye kukwira mumuchina weZamboni, uye neshure kwezviitiko zvekushanya kwezoo.
Zvinangwa zviri kumashure kwemakwikwi, hazvisi nyore.
Unganidza mifananidzo yatinogona kushandisa kuvaka ruzivo rwemaitiro evana
Vaka mafeni e facebook peji
Unganidza email kero
Vatungamiriri vacho vaityisa. Asi ino ndiyo nguva yeinternet uye iyo iPhone, uye panogara paine "App" yeiyo. Mune ino kesi iko kushanda kuri akakurumidza. Zvandinoda Nezve kushandisa Wildfire:
Zvaive zviri nyore kuvaka mushandirapamwe. (Zvichienderana nekuti inguvai yaunoda kushandisa pamifananidzo iwe unogona kukwira mune isingasviki awa
Isu tanga tine sarudzo: Sweepstakes, makuponi, mapikicha uye makwikwi enyaya
Inoisa nyore mu fan peji.
Facebook haidiwe -Moto wemoto unopawo widget yewebhusaiti uye microsite iwe yaunogona kunongedza vanokwikwidza nayo.
Iyo yakapusa mushandisi interface inoita kuti zvive nyore kune vanhu kukoka shamwari dzavo uye kuwedzera mukwikwidzi virally.
Mutengo unonzwisisika. Zvichienderana nehurefu hwemushandirapamwe, uye huwandu hwehunhu hwaunoda iwe, yako bhajeti rekutonga ichave chidimbu cheyawaimboshandisa kuita chirongwa chakadai. (Bhajeti yaDr Ciano yakashandisa madhora mazana maviri pachirongwa ichi chemavhiki matanhatu)
Zvandisingade pamusoro peMoto Wesango: (Ngatizvitarisei, hapana chakakwana)
Kungoisa kamwe chete pakombuta - ini ndinonzwisisa chikonzero, asi izvi zvinotitadzisa kusaina vanhu kumusoro pavanouya kuhofisi yaDr Ciano. Kunyange isu tichigona kuendesa zviyeuchidzo, havazi vese vanoenda kumba vozviita. (mushure mekunge ndanyora iyi posvo, isu takawana nzira yekuwedzera huwandu hwekutumira, saka chimwe chinhu chidiki chisingadi)
Tinogona kutora maemail emunhu wese anotumira, asi kwete wese munhu anovhota. Kubatsira chaiko kwemushandirapamwe uyu kuri kuwedzera runyorwa rwekutumira. Saka isu tinoda o vabereki NEZESE shamwari dzavo uye nhengo dzemhuri. Kuti tiite izvi, isu tinoshandura to formstack yekuvhota
Pazasi mutsara ... Ndiri kufara pamusoro peMoto Wemoto, uye ndichave ndichiyedza huwandu hwesiyano hwevatengi mumwedzi iri kuuya. Kusanganisira yeduwo: Biz Kadhi Kugadzira Wakamboshandisa Moto Wesango here? Ndezvipi zviitiko zvawakave nazvo nechigadzirwa?
Usakanganwa ku - pinda mwana wako kana muzukuru kuhwina a kuchovha paherikoputa, zamboni muchina uye nezvimwe!
Tags: vhidhiyo kushambadzira